Beesha Cowramale Oo Ugaas Cusub Ku Dooratay Duleedka Kismaayo. (Sawirro) – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Beesha Cowramale Oo Ugaas Cusub Ku Dooratay Duleedka Kismaayo. (Sawirro)
February 2, 2017 11:28 am by admin Views:
Idaacadda Andalus ayaa ka qayb gashay Xaflad ay soo agaasintay Beesha Cowramale oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Jubbooyinka, xafladdaasi oo lagu caleemo saarayay ugaas cusub oo beeshaasi yeelatay.
Xafladdan oo ka dhacday deegaanada duleedka Kismaayo ayaa waxa kasoo qayb galay salaadiinta gobolka iyo xubno ka tirsan wilaayada Jubbooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beesha Cawromale. waxana halkaasi si fiican loogu soo dhaweeyay ugaaska cusub ee beesha Cowromale Ugaas Cabdilqaadir Maxamed Cali.
Magacaabista ugaaskan cusub ayaa ka dambeeyay kulan dhex maray beesha Cowromale iyo wilaayada Jubbooyinka kulankaasi oo ay kasoo baxeen 11 qodob oo lagu heshiiyay, waxana qodobada ka mid ahaa in beeshu soo doorato ugaas cusub oo shareecada Islaamka ku hogaamiya. waxayna dadaal kadib soo doorteen Ugaas Cabdilqaadir Maxamed Cali.